Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 7)
Sida loo ogaado xaaladda batteriga ee taleefankaaga Android ama kiniinigaaga
Waxaan kuu sheegaynaa waxa ay tahay inaad sameyso si aad u hubiso xaaladda batteriga ee taleefankaaga Android. Barnaamijyada iyo barnaamijyada lagu ogaanayo inay shaqeynayaan ama dhibaatooyin leeyihiin
Samsung Galaxy M21 waxaa la soo saari lahaa 16-ka Maarso
Samsung's Galaxy M21 ayaa suuqa soo gali doona sida ugu dhakhsaha badan intii la filayay, waxay ku samayn doontaa iyada oo ay ku jirto baytari awood badan iyo qalab aad u xasuusiya M30s.
Infinix S5 Pro waa rasmi oo leh kamarad isdaba-joog ah iyo XOS 6.0
Infinix S5 Pro cusub ayaa hada si rasmi ah ugu shaqeynaya kamarad iskeed u shaqeysa iyo muuqaalo runtii aad muhiim u ah inkasta oo ay qiimo jaban tahay.
Ma la joogaa waqtigii la hagaajin lahaa shirkadda Huawei? Marka waad ogaan doontaa inaad wali haysato dammaanad
Waxaan kuu sharaxeynaa tillaabooyinka la raacayo si aan u ogaano haddii taleefankaaga Huawei uu wali leeyahay damaanad soo saaraha. Fiican tahay haddii ay tahay inaad u qaadatid dayactirka.
Tani waa sida ay Huawei u rabto inay ku soo jiidato horumariyayaasheeda bakhaarka arjiyada
Huawei ayaa ku socota dhammaanteed waxayna abuurtay barnaamij wadashaqeyn lala yeesho horumariyeyaasha si ay barnaamijyadooda ugu keenaan App Gallery
Vivo NEX 3s 5G wuxuu ku imaan doonaa Snapdragon 865 iyo kamarad gadaal seddex gees leh ah
Vivo waxay soo bandhigtay muuqaal video ah iyo laba sawir oo taleefankeeda xiga oo loo yaqaan 'NEX 3s 5G'. Waxaa la soo bandhigi doonaa 10-ka bishaan.
Oppo Find X2 Pro waxaa loo diiwaangeliyey inuu yahay mobelka leh kamaradda ugu fiican qiimeynta DxOMark [Dib u Eegista Kameradda]
Barxadda tijaabada ee DxOMark ayaa qiimeysay kamaradda Oppo Find X2 Pro waxayna soo gabagabeeysay inay tahay tan ugu fiican qiimeynteeda.
Oppo Watch waa rasmi: Waxay ku timid midab OS iyo laba cabbir ah
Oppo waxay si rasmi ah u shaacisay Watch, oo ah smartwatch oo ku yimaada laba cabbir oo kala duwan waxayna siisaa madaxbanaani weyn
Oppo Find X2 iyo Find X2 Pro, laba calan oo isirka ah oo leh 120 Hz screens iyo Snapdragon 865
Oppo waxay horey u soo bandhigtay oo bilawday taxanayaasheeda cusub ee loo yaqaan 'Qualcomm's Snapdragon 865', taas oo aan ka duwaneyn Find X2.
Xiaomi Mi MIX 3 wuxuu bilaabmayaa inuu helo xasilloonida Android 10 adduunka
Xiaomi waxay ku siineysaa cusbooneysiinta barnaamijka xasilloon ee ka socda Android 10 hoosta MIUI 11 lakabka u-dejinta Mi MIX 3.
Galaxy Buds + wali way fududahay in la dayactiro
Jiilka labaad ee Samsung Galaxy Buds ayaa xitaa ka fudud dayactirka jiilkii ugu horreeyay, sida ay sheegeen ifixit.
Qalabka saacadda ee Galaxy S20 waxaad ku dhejin kartaa alaarmiga 'Spotify'
Xulo mawduuca aad jeceshahay inuu kuugu kiciyo maalin kasta adiga oo isticmaalaya Galaxy S20-kaaga cusub taasna waxaa laga heli karaa barnaamijka saacadda.
TCL waxay ku dhawaaqeysaa laba fikradood oo telefon isku laablaaban oo jilicsan
TCL waxay ku dhawaaqday laba fikradood oo taleefan oo cusub, oo dabacsan oo laallaabi karo. Labaduba waxay kujiraan marxaladda bislaanshaha kahor intaan si rasmi ah loo bilaabin.
Taxanaha Samsung ee Galaxy S20 wuxuu helayaa cusbooneysiintiisii ​​labaad iyadoo dhowr jeer la hagaajiyay kamaradaha
Samsung waxay soo bandhigeysaa cusbooneysiin cusub oo ku saabsan taxanaha Galaxy S20 ee hagaajinaya qaybteeda sawirada iyo inbadan.
Huawei Nova 7 waxaa lagu bilaabi lahaa 40 W oo tiknoolajiyad degdeg ah lagu soo dallaco
Macluumaad cusub oo ka soo baxay hay'adda shahaadada ee Shiinaha ee 3C ayaa soo socota in shirkadda Huawei ee Nova 7 ay taageero u heli doonto 40W oo si dhakhso ah loogu soo oogo.
Realme 6 iyo 6 Pro horeyba waa rasmi: ogow astaamahooda iyo wax walba oo ku saabsan labada taleefan
Realme 6 iyo 6 Pro ayaa ugu dambeyntii horeyba loo soo bandhigay loona bilaabay qaab ahaan. Ogow dhammaan tilmaamaha, qiimaha iyo helitaanka kuwan.
Redmi Note 7 Pro wuxuu bilaabmayaa helitaanka cusboonaysiinta Android 10 ee hoosta MIUI 11
Xiaomi waxay bilowday inay riixdo cusbooneysiinta ku dareysa nooca beta ee MIUI 11 oo leh Android 10 ee Shiinaha oo loogu talagalay cutubyada 'Redmi Note 7 Pro'.
Motorola's Moto G8 cusub: dalool HD + shaashad, Snapdragon 665 iyo in ka badan
Motorola waxay leedahay taleefan casri ah oo casri ah oo ku jira buuggeeda ballaaran. Tani waxay u timid sidii Moto G8, mobilada waxqabadka dhexdhexaadka ah ee la filayo horeyba rasmi ahaan.
Sida loo beddelo luqadda Kaaliyaha Google
Kaaliyeyaasha codka waxay yimaadeen dhowr sano ka hor inay joogaan, si ay u noqdaan hal aalad dheeraad ah markay tahay ...
OnePlus 8 waxaa la soo bandhigi doonaa Abriil 14 wuxuuna ka koobnaan doonaa 3 nooc
Xanta ugu dambeysa ee la xiriirta OnePlus 8, waxay soo jeedineysaa in bisha Abriil 14 si rasmi ah loo soo bandhigi doono, iyadoo lagu darayo nooc Lite ah oo laga soo galo
Sawirada ugu horreeya ee Google Pixel 4a waa la sifeeyaa
Sawirradii ugu horreeyay waxaa laga helay waxa Pixel 4a noqon doono, sawirro xaqiijinaya nashqadda lagu daadiyay waxbixinta dhammaadka 2019.
Huawei P40 Lite E waa nooca miisaaniyadda ee kala duwan
Shirkadda Huawei ayaa markii ugu horreysay ka bilawday dalka Poland barnaamijka 'P40 Lite E', taleefan leh astaamo ka yar tirade P40 Lite ee lagu dhawaaqay bishii Febraayo.
Sida loo helo menu-ka Windows 7 ee Windows 10.
Video-post oo aan ku sharxayo sida loo helo menu-ka Windows 7 ee Windows 10 qaab aad iyo aad u fudud oo, wixii ka sarreeya, bilaash ah.
Samsung Galaxy A21 waxa ku daatay shaashadda Infinity-O iyo afar kamaradood
Waa mid ka mid ah moodooyinka aan faahfaahintiisa la aqoon, laakiin si hufan ayey ugu muuqatay sifiican oo muujinaya guddiga ...
Black Shark 3 iyo Black Shark 3 Pro, casriga casriga ah ee cusub ee loo yaqaan 'Xiaomi' oo la soo saaray
Xiaomi waxay leedahay laba calan oo cusub oo loogu talagalay cayaaraha, mana ahan taleefannada kale ee waxqabadka sarreeya marka laga reebo Black Shark 3 iyo 3 Pro.
Miyey ku dhibaysaa adiga Xiaomi ama Redmi? Marka waad qarin kartaa!
Waxaan si fudud oo dhakhso leh ugu sharraxeynaa sida loogu qariyo qariidad kasta oo Xiaomi ama taleefanka casriga ee Redmi ee casharradan.
10-ka taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan Febraayo 2020, sida laga soo xigtay AnTuTu
Halbeegga 'AnTuTu benchmark' wuxuu noo keenayaa qiimeynta 10-ka taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan Febraayo 2020. Waxaan halkan kugu tusaynaa!
Samsung Galaxy M21 ma noqon doono wax ka badan magac caan ah Galaxy M30s
macluumaad cusub ayaa tilmaamaya in Samsung ay dooneyso inay soo saarto Galaxy M21 oo leh astaamo isku mid ah iyo tilmaamo farsamo ee Galaxy M30s ah.
Xagee looga iibsadaa S Pen loogu talagalay Galaxy Note
Luminta S Pen ee Galaxy Note nooc kasta oo ka mid ah noocyadeeda kala duwan maahan riwaayad, maadaama euro aad u yar, aan ku heli karno mid kale.
Oppo's smartwatch, Taxanaha loo yaqaan 'Oppo Watch Series', oo la soo saaray 6-dii Maarso
6-da Maarso, Oppo smartwatch, oo ah 'Oppo Watch Series', ayaa si rasmi ah loo soo bandhigaa, kaas oo soo saaruhu ku galayo smartwatches
Sony S20A, waa nooca cusub ee shirkadda Japan ee loo oggolaaday inay tahay mobiil qiimo jaban
Sony waxay mar labaad isu diyaarinaysaa inay suuqa u gasho moobillo miisaaniyadeed oo miisaaniyadoodu hooseyso oo qaabab dhexdhexaad ah leh.
Nooca caalamiga ah ee Oppo Reno 3 Pro ayaa lagu dhawaaqay
Oppo waxay soo saartay nooca caalamiga ah ee Reno 3 Pro. Noocaan ah taleefannada casriga ah wuxuu ku sharaddeeyaa processor-ka moobiilka ee kale.
Taxanaha Redmi K30 wuxuu iibiyey in kabadan hal milyan oo unug
Redmi K30 iyo K30 5G waxay gaareen hal milyan oo unug oo la iibiyay, sida lagu sheegay bayaanka uu soo saaraha Shiinaha dhawaan bixiyay.
Samsung's Galaxy S10 Lite wuxuu helaa horumarin kala duwan oo kamarad ah iyada oo ay ugu wacan tahay cusbooneysiinta cusub
Samsung waxay u fidineysaa cusbooneysiin cusub oo firmware ah Galaxy S10 Lite, oo ah midka ugu sarreeya ee leh Qualcomm's Snapdragon 855.
Galaxy S10 wuxuu horey u haystay cusbooneysiinta amniga Maarso ee la heli karo
Qalabka amniga ee bisha Maarso 2020 ee Galaxy S10 ayaa hadda la heli karaa, in kasta oo aan adduunka laga helin xilligan.
LG Q51 waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay: Kaamirada Triple iyo kuwa ku hadla qalabka maqalka
LG waxay soo saartay qalab cusub oo heer dhexe ah oo loo yaqaan Q51. Telefoon buuxiya filashooyinka oo loogu talagalay suuqa Kuuriya.
Huawei Enjoy 10e waa rasmi: batroolka 5.000 Mah iyo Android 10
Huawei waxay si rasmi ah u shaacisay xubinta afaraad ee qoyska raaxada 10, oo loo yaqaan Huawei Enjoy 10e. Waa qalab heer-gal ah.
Oppo Find X2 Pro qeexitaan buuxa ayaa shaaca laga qaaday
Tilmaamaha buuxa ee Oppo ee calanka cusub, ee Find X2 Pro, ayaa la soo saaray .. Taleefan la shaacin doono 6-da Maarso.
Xiaomi Mi 10 ayaa la bilaabi doonaa in loo bandhigo caalami ahaan laga bilaabo bartamaha bishan
Xiaomi ayaa ku dhawaaqday in taxanaha Mi 10 uu bilaabi doono in laga iibiyo adduunka laga bilaabo bishan Maarso. Redmi 9 ayaa fiirinaya.
Kooxda Realme Band ayaa soo bandhigeysa faahfaahin ka hor inta aan la soo bandhigin Maarso 5
Realme ayaa bilaabi doonta 5-ta bisha Maarso casriga casriga ah ee cusub, oo loo yaqaan Band. Waxay imaan doontaa iyadoo ay weheliyaan taleefannada cusub ee Realme 6 iyo Realme 6 Pro.
Sawirada dhabta ah ee Oppo Find X2 ayaa u muuqda kahor intaan la bilaabin
Waxaan dooneynaa inaan ugu dambeyn la kulanno Oppo's Find X2. Kahor intaan la gaarin maalintii la soo saaray, sawirada dhabta ah ee taleefanka ayaa soo baxay.
Android 10 sidoo kale waxay gaadhay Redmi Note 8 Pro iyada oo loo marayo OTA cusub
Redmi Note 8 Pro ayaa ugu dambeyntii soo dhaweyneysa cusbooneysiin cusub oo software ah oo lagu daro Android 10.
Xiaomi Mi A3 wuxuu ugu dambeyntii helayaa cusbooneysiinta Android 10
Xiaomi ayaa horay u sii daayay barnaamijka cusbooneysiinta ee ku daraya Android 10 Mi A3. Shirkaddu waxay ku bixineysaa OTA.
Kaarboon 1 Mark II, oo ah taleefankii ugu horreeyay adduunka ee laga sameeyo fiber-ka kaarboon
Mobile-ka Kaarboon wuxuu noo keenayaa taleefanka casriga ah ee ugu horreeya adduunka ee fiber-ka ah. Midkaan waxaa lagu magacaabaa Kaarboon 1 Mark II wuxuuna la yimaadaa Mediatek Helio P90.
Samsung Galaxy A11 ayaa ka muuqata muuqaal muujinaya saddex kamaradood
Samsung Galaxy A11 ayaa ka soo muuqday joornaal muujinaya faahfaahin cusub, oo ay ku jiraan inay ku jiri doonaan saddex kamaradood oo gadaal ah.
Sawiradan dhabta ah ee Huawei P40 Pro waxay na tusayaan dhammaan faahfaahinta naqshadeynta
Sawirada dhabta ah ee Huawei P40 waa la daadiyay, halkaas oo aan ka arki karno qaabka ugu dambeeya ee calanka Huawei ee soo socda uu u ekaan doono.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite oo lagu muujiyey bandhigga S-Pen
Bixiyaha ugu horreeya ee Samsung Galaxy Tab S6 Lite cusub ayaa soo muuqday, kaas oo uu ku muujinayo S-Pen iyo waliba inuu noqon doono nooca LTE.
Shaashadda OnePlus 8 ayaa imaan doonta iyadoo la filaayo sheeko cusub
Sawir kiiska taleefanka ayaa la soo daadiyay halkaas oo aan ku arki karno lama filaan xiiso leh shaashadda OnePlus 8.
Samsung Galaxy S20 miyaa wax aan macquul aheyn in la jabsado?
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta Qodobka 'Safe Element', oo ah qalab loo qoondeeyey oo ka kooban Samsung Galaxy S20 isla markaana ka dhigaya wax aan macquul aheyn in la jabsado.
Samsung waxay ka shaqeyneysaa OTA oo hagaajineysa tayada sawirada Galaxy S20 Ultra
Sida lagu sheegay bayaan rasmi ah oo ay soo saartay shirkadda Samsung, cusbooneysiin ayaa laga shaqeynayaa si kor loogu qaado tayada sawirrada Galaxy S20 Ultra.
Realme X iyo Realme 5 Pro waxay helayaan xirmooyin cusub oo firmware ah
Cusbooneysiin cusub ayaa ku soo socota Realme X iyo Realme 5 Pro, oo ah labada taleefan ee la sii daayay, siday u kala horreeyaan, bishii May iyo Ogosto ee sanadkii hore.
Cusbooneysiin cusub ayaa imaaneysa Galaxy Note 10: waxay hagaajineysaa furitaanka wajiga iyo dhaqdhaqaaqa
Samsung waxay sii deyneysaa cusbooneysiin cusub oo software ah oo loogu talagalay calanka Galaxy Note 10 iyo Galaxy Note 10 Plus.
Samsung Galaxy S10 Lite waxaa lagu cusboonaysiiyay nooc cusub oo ah 512 GB oo keyd ah
Samsung ayaa soo saartay nooc cusub oo ROM ah oo loo yaqaan 'Galaxy S10 Lite', oo ka mid ah taleefannada casriga ah ee ugu caansan.
Realme 6 waxaa lagu xaqiijiyey Mediatek's Helio G90 oo kujira liistada Geekbench
Heerka Geekbench wuxuu Realme 6 ku diiwaan galiyay keydkiisa oo uu la socdo processor-ka Mediatek ee Helio G90.
LG V60 ThinQ 5G waa rasmi: Snapdragon 865 iyo muuqaalka Dual Screen
LG ayaa ku dhawaaqday V60 ThinQ 5G cusub, oo ah telefoon laba shaashad leh oo la iman doona processor-ka awoodda badan ee Snapdragon 865.
Nubia Red Magic 5G waxay ka muuqaneysaa sawir dhab ah oo xaqiijinaya qaabkeeda dambe ee gaarka ah
Sawirka dhabta ah ee qarsoon ee Nubia Red Magic 5G ee soo socda ayaa goor dhow ka soo muuqday webka. Tani waxay xaqiijineysaa nashqadeynta soo jiidashada leh ee qeybta dambe.
Vivo Z6 5G, taleefanka casriga ah ee cusub ee loo yaqaan 'Snapdragon 765G' oo la bilaabay
Vivo Z6 5G ayaa ugu dambeyn la sii daayay soo saaraha Shiinaha. Midkani wuxuu leeyahay Snapdragon 765G SoC iyo astaamo kale oo heer dhexe ah.
HTC Wildfire R70, oo ah dhamaadka-hoose ee cusub ee shirkadda Taiwanese oo ay la socoto Mediatek's Helio P23
HTC waxay hada shaacisay HTC Wildfire R70, oo ah taleefan casri ah oo waxqabadkiisu hooseeyo oo la yimaada Mediatek's Helio P23 chipset.
Snapdragon 720G wuxuu noqon doonaa SoC ee Realme 6 Pro, sida uu qabo Geekbench
Realme 6 Pro ayaa lagu arkay Geekbench oo leh nidaamka hawlgalka ee Android 10 iyo Snapdragon 720G, chipset-ka cusub ee Qualcomm.
Oppo Find X2 Pro waxay muujineysaa kamarad periscope ah oo sawiro xayeysiis ah ah
Sawiro dhiirrigelin ah ayaa muujinaya kamaradda Oppo ee Find X2 Pro periscope camera, oo ah taleefan ay isugu iman doonaan Oppo Find X2.
Kiniinka miisaaniyadda cusub ee Samsung waa Galaxy Tab S6 Lite
Kiniiniga cusub ee dhammaan jeebabka ee shirkadda Kuuriya ay qorsheyneyso inay suuqa ka soo saarto, waxaa ku jira magaca ugu dambeeya Lite: Galaxy Tab S6 Lite
Oppo Find X2 waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa 6-da Maarso
Boorar ku saabsan dhacdada uu Oppo qorsheynayo inuu sameeyo ayaa la shaaciyay, oo soo bandhigi doona Raadi X2 bisha Maarso 6. Waxay sidaas ku samayn doontaa iyada oo lala kaashanayo alaabooyinka kale.
Realme X50 5G Master Edition ayaa lagu dhawaaqay - horay usii amar
Realme X50 5G Master Edition ayaa dib loo shaaciyey waxaana hadda lagu keydin karaa khadka tooska ah. 8da Maarso, iibintooda ugu horreysa ee caadiga ah ayaa dhici doonta.
Boostada rasmiga ah ee rasmiga ah ee 'Redmi K30 Pro' waxay xaqiijineysaa kamaraddeeda soo-saarka iyo taariikhda la bilaabayo
Redmi waxay daabacday boodh cusub oo rasmi ah oo muujinaya qayb ka mid ah bilicsanaanta hore ee K30 Pro.Waxay kaloo xustay bisha la bilaabi doono.
Huawei P40 Lite ayaa la bilaabay: ogow wax walba oo ku saabsan bartan-dhexaadkan cusub
Shirkadda Huawei ayaa ugu dambayntii soo bandhigtay P40 Lite, oo ah taleefankeeda casriga ah ee dhexdhexaadka ah ee dhexdhexaadka ah kaas oo la socda processor-ka Kirin 810.
Sida loo ogaado wareegyada lacag bixinta ee taleefankaaga Xiaomi
Waxaan kuu sharraxeynaa sida loo ogaado inta wareeg ee lacag bixin ee taleefankaaga Xiaomi ka haray. Ma la joogaa waqtigii la beddeli lahaa batteriga ama ma sii socon kartaa waqti dheer?
AppGallery-ka Huawei waa dukaanka saddexaad ee ugu weyn dukaammada
Dukaanka App-ka ee Huawei waxaa isticmaala bil kasta in kabadan 400 milyan oo isticmaale wuxuuna noqday kan 3-aad ee ugu dukaamaysiga badan aduunka
Oppo's smartwatch wuxuu daadanayaa isagoo adeegsanaya Google Wear OS
Sawir cusub oo loo yaqaan 'Oppo smartwatch' ayaa sir ah, kaas oo imaanshihiisu ujeedkiisu yahay inay si wadajir ah ula socdaan Oppo Find X2 bisha Maarso.
TENAA waxay daabacdaa sawirada la bixiyay ee Red Magic 5G ee Nubia
Nubia Red Magic 5G waxay sii wadaa inay ka muuqato warbaahinta kala duwan. Markan waa keydka macluumaadka ee TENAA halkaasoo uu ku dhigayo sawirradiisa cusub ee la turjumay.
Vivo Z6 5G ayaa la xaqiijiyay inuu ku yimid Snapdragon 765 iyo 5G oo leh laba qaab oo taageero ah
Iyada oo loo marayo boodhadh dhowaan la wadaagay, Vivo waxay xaqiijineysaa in Z6 5G ay ku shaqeyn doonto processor-ka Snapdragon 765G.
Honor V30 Pro 5G iyo 9X Pro ayaa laga bilaabay adduunka
Sharafta ayaa rasmi ka dhigtay laba ka mid ah qalabkeeda loogu jecelyahay suuqa caalamiga, kuwaas oo ah Sharafta ...
Black Shark 3 Pro 5G waa moobayl leh waxqabadka ugu fiican dhammaan, sida ku cad muuqaalkiisa AnTuTu
Maamulaha guud ee Black Shark wuxuu shaashadda ka soo qaaday wadarta dhibcaha Black Shark 3 Pro 5G akoonkiisa rasmiga ah ee Weibo.
Android 11 waxaa tijaabiyey Galaxy S10 Plus oo ku taal Geekbench
Geekbench wuxuu mar kale taxay Samsung Galaxy S10 Plus, laakiin kuma qorna Andrpid 10, laakiin wuxuu la socdaa Android 11, nooca cusub ee OS-ga Google ee mobilada.
Samsung Galaxy M31 waa rasmi: Afar kamaradood iyo 6.000 mAh baytariga
Samsung ayaa ku dhawaaqday Galaxy M31 cusub, oo ah meel sare oo higsaneysa bartamihii dhexe oo leh batteri weyn iyo qiimo jaban.
Realme X50 Pro 5G hadda waa rasmi. Qeexitaanada iyo qiimaha Realme-dhamaadka-cusub
Ballanqaadka Realme ee dhamaadka-sare ee adduunka taleefanka waa Realme X50 Pro 5G, oo ah terminaal ka kaca qiimaha iyo dheefaha marka loo eego sanadkii ka horreeyay.
Sharadka cusub ee Sony ee 2020 waa Xperia 1 II iyo Xperia 10 II
Ballanqaadka cusub ee Sony ee heerka sare iyo dhexe ee taleefanka waxaa lagu magacaabaa Xperia 1 I iyo Xperia 10 II
Nooca labaad ee taleefanka gacanta ee isku laaban Huawei, Mate Xs, ayaa hadda rasmi ah
Jiilka labaad ee Huawei Mate X, Mate Xs, ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay wuxuuna imaan doonaa suuqa Isbaanishka bisha Maarso ee 2.499 euro.
Motorola Edge, tani waxay noqon doontaa calanka soo socda ee Motorola
Waxaan kuu sheegeynaa tafaasiisha ugu horeysa ee Motorola Edge, Calanka soo socda ee Motorola taasina waxay ka dhex muuqan doontaa qalabka xoogga badan ee terminalku ku sii fidayo.
iQOO 3 5G wuxuu rasmiyan ula socdaa Snapdragon 865 iyo 55W load
Shirkadda iQOO ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay 3 5G cusub, oo ah taleefan la socda processor-ka awoodda badan ee Qualcomm iyo saddex nooc oo kala duwan oo la heli karo.
Bedelka Vivo NEX 3 5G wuxuu ka muuqanayaa Geekbench oo leh Snapdragon 865
Beddelka Vivo NEX 3 5G waxaa lagu qoray diiwaanka Geekbench oo leh processor-ka Qualcomm ee Snapdragon 865.
Madaxweynaha ZTE ayaa shaaca ka qaaday in shirkadu ay soo saarayso 5mm chips
Madaxa shirkadda ZTE iyo madaxweyne Xu Ziyang ayaa lagu soo waramayaa inay wareysiga ku sheegeen in shirkadda ZTE ay horumarinayso 5nm chips.
Sidee ugufiican yahay Xiaomi Mi 10 Pro duubista iyo dhawaqa?
DxOMark waxay tijaabisay Xiaomi Mi 10 Pro si loo arko sida ay ugu wanaagsan tahay duubista iyo soo saarida maqalka iyo codka. Soo ogow!
Black Shark 3 Pro: kani waa waxa Geekbench ka yiraahdo taleefanka gacanta ee xiga ee Xiaomi
Barnaamijka tijaabada Geekbench wuxuu ka diiwaan galiyay Xiaomi's Black Shark 3 Pro keydkeeda xogta Snapdragon 865.
HTC waxay bilaabi doontaa taleefankeedii 5G ee ugu horreeyay laga bilaabo 2020
HTC waxay ku laaban doontaa qaybta taleefanka iyada oo leh taleefan cusub oo leh isku xirnaanta 5G. Waxay bilaabi doontaa sanadkaan oo dhan 2020 sida la saadaalin karo.
Sawirro cusub oo xaqiijinaya qaabeynta Pixel 5
Haddii naqshadeynta sawirradan ugu dambeyntii la xaqiijiyo, Google wuxuu sii wadi doonaa inuu ku sharaddeeyo qaab aad u dabeecad iyo muuqaal leh oo ku jira qaybta Pixel
6 sababood oo ah sababta Raadi My Samsung Mobile ay aad uga fiican tahay Raadinta Google Mobile-kaaga
6 sababood oo aad ugu fududaanayso inaad ka mid noqoto Raadi Samsung moobaylkayga ah oo aad joojinayso adeegsiga Google. Sababaha xoogga leh ee aan muujinno.
Meizu 17 wuxuu imaan doonaa Abriil isagoo wata shaashad 90 Hz ah
Meizu 17 wuxuu imaan doonaa laga bilaabo bisha Abriil oo faahfaahin cusub ayaa la ogyahay ka hor inta aan laga bilaabin suuqa Aasiya oo ah ikhtiyaar muhiim ah.
Infinix S5 Pro ayaa daadanaya oo muujinaya kamarad sawir qaade ah
Infinix S5 Pro waa la dusay, waxay muujineysaa kaamiro sawir qaade ah oo pop-up ah sidoo kale dhabarka waxay ku tusineysaa ilaa seddex dareemayaal.
Baro tilmaamaha hawada ee 'S Pen' si aad ugu noqoto kamarad Galaxy Note 10 ah
Baro tilmaamaha hawada S Pen oo leh barnaamijka kamaradda si aad sawirro uga qaaddo meel fog ama aad u beddesho qaabka; xitaa u kala beddel qaabka caadiga ah iyo xagalka.
Huawei P40 waxay la imaan doontaa Wi-Fi 6+ isku xirnaanta sida caadiga ah
Huawei wuxuu si muuqata uga shaqeynayaa qalabkiisa cusub ee 2020, gaar ahaan P40, taleefan casri ah oo heer sare ah iyo mid ka mid ah kuwa aadka loo filayo.
Black Shark 3 5G wuxuu yeelan doonaa 65W lacag deg deg ah iyo 5.000 mAh batari
Xiaomi waxay ku xaqiijineysaa maareeyeheeda Weibo in lagu daro bateriga si dhakhso leh u shaqeeya iyo awoodda batteriga ee Black Shark 3 5G.
Batariga 5000 mAh oo leh 44 W oo degdeg ah ayaa waxa Vivo Z6 5G yeelan doonta
Vivo, iyada oo loo marayo boor cusub oo xayeysiis ah, ayaa shaaca ka qaaday in taleefanka dhexe ee Z6 5G uu soo bandhigi doono batari 5000 mAh ah oo leh 44 W oo degdeg ah.
Verizon's Galaxy S9 waxay ku soo dhaweyneysaa Android 10 cusbooneysiin cusub
Verizon ayaa ku dhawaaqday in Galaxy S9 ay heleyso cusbooneysiinta ku dareysa Android 10 oo leh qalabka ugu dambeeya ee amniga.
Oppo Reno 3 Pro cusub oo aan lahayn isku xirnaanta 5G ayaa hadda la heli karaa si horay loogu dalbado
Oppo waxay soo saartay nooc ka mid ah Reno 3 Pro oo aan wax taageero ah u hayn isku xidhka 5G wuxuuna la yimaadaa kamarad laba sawir leh.
DxOMark wuxuu qiimeeyaa OnePlus 7T Pro oo ah mid kamid ah taleefannada casriga ah ee leh kamaradaha ugu wanaagsan xilligan [Dib u eegista Kaamirada]
Kaamirada OnePlus 7T Pro waxaa tijaabiyay oo qiimeeyay DxOMark. Imtixaan ka dib, barxadda ayaa ku qiimeysay mid ka mid ah kuwa ugu fiican.
Sony waxay ku dhawaaqday Xperia L4, oo ah taleefan heer-gal ah
Sony ayaa ku dhawaaqday xubin cusub oo ka mid ah taxanaha L, waxa loogu yeero Xperia L4. Waa terminal kaladuwan oo aasaasi ah oo saddax kamaradood dhabarka ku yaal.
Galaxy A71 5G wuxuu marayaa Geekbench oo uu la socdo Exynos 980
Bogga Geekbench wuxuu ka helay faahfaahin cusub oo ku saabsan casriga 5G ee soo socda Samsung, gaar ahaan nooca Galaxy A71.
Tani waa tiknoolajiyada nonacell ee dareenka 108 MP ee taxanaha Samsung ee Galaxy S20
Samsung ayaa soo saartay jiilkeeda soo socda ee 108 MP sensor sensor Febraayo 11; tan waxaa lagu magacaabaa ISOCELL Bright HM1. Waxaan ka hadleynaa isaga!
Soo bandhigida OnePlus 8 way ka duwanaan doontaa Coronavirus darteed
Maaddaama loo yaqaan 'coronavirus', waxay umuuqataa in soo bandhigidda Oneplus 8 ay qatar ku jirto. Agaasimaha guud laftiisu wuxuu raadinayaa xulashooyin uu xalka ku raadiyo. Maxay sameyn doonaan?
Samsung waxay bilowday wax soo saar ballaaran oo ah 6 iyo 7nm EUV chips
Samsung Electronics ayaa ku dhawaaqday in khadkeeda wax soo saarka cusub ee 6 iyo 7nm EUV chip semiconductor uu bilaabay shaqadiisa.
Samsung's Galaxy A70 wuxuu helayaa cusbooneysiinta Android 10 hoosta One UI 2.0
Samsung Galaxy A70 wuxuu soo dhaweynayaa cusbooneysiin cusub oo software ah. Tani waxay ku dareysaa Android 10 hoosta One UI 2.0.
Vivo Z6 5G horeyba waxay u leedahay taariikh rasmi ah oo la soo saari doono waxayna la imaan doontaa Snapdragon 765G
Vivo waxay diyaarineysaa soo bandhigida mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee soo socda, oo aan cid kale ahayn Vivo Z6 5G.
Xiaomi Mi 10 Pro ayaa mar labaad la iibinayaa Febraayo 25
Xiaomi ee Mi 10 Pro ayaa la iibin doonaa markii labaad bisha Febraayo 25 ee soo socota ee Shiinaha. Tani waxaa ku dhawaaqday shirkadda.
IQOO 48-da 3MP Quad Camera Ayaa Lagu Dhawaaqay Shirkada
iQOO waxay soo saartay boodh cusub oo rasmi ah oo muujinaya in iQOO 3, oo ah terminaalka xiga ee soo socda, lagu soo bandhigi doono kamarad afar geesood ah oo 48 MP ah.
Oppo Waxay Shaacisay Xaashida Cusboonaysiinta ColorOS 7
Midabka OS 7 wuxuu imaan doonaa bilaha soo socda, si toos ah telefoonada qaar bisha Maarso 10 iyo 20ka Maarso wuxuu ku sameyn doonaa seddex terminal sida caadiga ah.
OnePlus 7T ugu dambeyntii waa la tixgeliyaa oo wuxuu helaa cusbooneysiintii ugu dambeysay ee OxygenOS
OnePlus wuxuu ugu dambeyntii kuugu deeqayaa cusbooneysiinta cusub ee OxygenOS ee loogu talagalay OnePlus 7T kaas oo ku daraya jaangooyada amniga 2020.
Realme X50 Pro 5G ayaa soo bandhigi doonta laba kamarad shaashad iswada leh oo leh xasilinta fiidiyowga
Realme ayaa soo saartay boodhadh cusub oo ka hadlaya kamaradda laba-geesoodka ah ee loo yaqaan 'X50 Pro 5G'. Tani waxay muujineysaa inay leedahay 32 MP shidma weyn iyo xog kale.
LG W10 Alpha, casriga cusub ee qiimaha-jaban ee casriga ah ee hadda rasmiga ah
LG waxay mar kale soo geleysaa qeybta hoose ee casriga. Waxay tan ku sameysaa hadda W10 Alpha cusub, oo ah nooc si caddaalad ah u suubban.
Nooca 4G ee iQOO 3 ayaa la shaqeyn doona Snapdragon 865
Sarkaal sare oo ka tirsan shirkadda iQOO, oo adeegsanaya bartiisa rasmiga ah ee Twitter-ka, ayaa shaaca ka qaaday in nooca 4G ee iQOO 3 uu la shaqeyn doono Snapdragon 865.
Galaxy S20 wuxuu yareeyaa heerka cusbooneysiinta si otomaatig ah xaaladaha qaarkood
Qaab asal ahaan, 120 Hz ee shaashadda Galaxy S20 lama dhaqaajinayo, marka lagu daro kala duwanaanta waxay kuxirantahay heerkulka batteriga iyo heerkiisa.
Galaxy S20 iyo Galaxy Z Flip waxay kuu oggolaanayaan inaad nuqul ka sameysato qoraalka iyo sawirrada taleefankaaga casriga ah oo aad ku dhajiso kombuyuutarkaaga
Samsung oo leh S20 iyo Z Flip, waa taleefankii ugu horreeyay ee Android ee kuu oggolaanaya inaad nuqul ka sameysatid oo aad ku dhejiso qoraalka iyo sawirrada u dhexeeya Windows 10 iyo Android
Qiimeynta DxOMark waxay leedahay hogaamiye cusub, waana Xiaomi Mi 10 Pro [Dib u eegida kamarada]
Xiaomi Mi 10 Pro waa hogaamiyaha cusub ee aan lagu muransaneyn qiimeynta taleefannada casriga ah ee leh kamaradda ugu fiican ee ka socota xogta DxOMark.
Qiimaha iyo qeexitaannada buuxa ee Samsung Galaxy M31 ayaa soo baxay oo ay la socdaan kuwa la siinayo
Dhammaan astaamaha buuxa iyo qeexitaannada Samsung Galaxy M31 ayaa soo ifbaxay, sidoo kale qiimeyntooda iyo soo bandhigistooda.
Dhibaatooyinka sahayda? Xiaomi Mi 10 ayaa lagu iibiyay wax ka yar hal daqiiqo iibkiisii ​​labaad
Iibinta labaad ee Xiaomi Mi 10 ayaa loo qorsheeyay 21-ka Febraayo, laakiin shirkadda ayaa sameysay shalay. Tani daqiiqad ma socon.
Daahfurka caalamiga ah ee 'Honor 9X Pro' horeyba waa loo qoray; imaan doona Huawei Mobile Services
Maamuusku wuxuu horeyba u shaaciyay taariikhda rasmiga ah ee rasmiga ah ee caalamiga ah ee 'Honor 9X Pro', mid ka mid ah bartamaha ugu caansan
Samsung waxay u taagan tahay inay ka faa'iideysato dhibaatooyinka soo saarista Apple sababtoo ah coronavirus
IPhone-ka waxaa lagu sameeyaa Shiinaha dalkana waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay coronavirus. Samsung waxaa loo qoondeeyay inay soo saarto dhammaan Aasiya.
Sida laga soo xigtay Display Mate, shaashadda Galaxy S20 Ultra waa tan ugu fiican suuqa
Hal sano oo dheeri ah, Samsung waxaa loo caleemo saaray inuu yahay soo saaraha ugu wanaagsan ee shaashadaha mobilada ee leh Galaxy S20 Ultra, kaas oo uu ku gaadhay kaalinta koowaad ee Display Mate
Galaxy Home Mini lama iibin doono, ugu yaraan hadda, si madaxbanaan
Samsung waxay ku egtahay iibsashada Galaxy Home Mini macaamiisha horay u soo iibsatay Galaxy S20, xaddidan oo aynaan ogayn goorta ay dhammaanayso.
Jiilka labaad ee Galaxy Fold ayaa ku dari kara S Pen
Jiilka labaad ee Galaxy Fold 2, oo arki kara iftiinka bisha Juun ee sanadkan, ayaa imaan kara isagoo ay wehliyaan S Pen
Honor 9X Lite wuxuu u muuqdaa khadka tooska ah oo muujinaya qeexitaannada iyo qiimaha
Honor 9X Lite horey ayaa loo sii amri karaa iyada oo loo marayo tafaariiqle Bakistaan ​​ah, taas oo ay ku tusayso dhammaan qeexitaannada iyo sidoo kale qiimaha.
Shaashad 90Hz Super AMOLED ah ayaa ah tan lagu xaqiijiyay Realme X50 Pro 5G
Realme ayaa ku dhawaaqday waxa noqon doona shaashadda aan ka heli doonno Realme X50 Pro 5G iyada oo loo marayo boor cusub oo xayeysiis ah.
Madaxweynaha Nubia wuxuu xaqiijinayaa Red Magic 5G wuxuu la imaan doonaa 16GB RAM
Nubia Red Magic 5G ayaa lagu soo bandhigi doonaa suuqa iyada oo la siin doono ilaa 16 GB oo RAM ah, sida uu sheegay Ni Fei oo ah madaxweynaha shirkada Shiinaha.
Taariikhda rasmiga ah ee daahfurka Realme X50 Pro 5G waa la xaqiijiyay: waxaa lagu soo bandhigi doonaa Spain iyo India
Realme ayaa ku dhawaaqday oo xaqiijisay mar kale taariikhda la bilaabayo calankeeda soo socota, oo aan cid kale ahayn Realme X50 Pro 5G.
Honor 9X wuxuu helaa nooc midab cusub oo dhalaalaya oo loo yaqaan Emerald Green
Honor 9X wuxuu helay nooc cusub oo midab kala duwan loo yaqaan Emerald Green. Tan waxaa laga bilaabay adduunka.
Noocyada beta 20.2.17 ee MIUI 11 ayaa imanaya Xiaomi Mi 10 iyo Redmi K30
Xiaomi waxay sii deyneysaa cusbooneysi cusub oo loogu talagalay laba ka mid ah taleefannadiisa ugu caansan xilligan, kuwaas oo ah Mi 10 iyo horeyba loo yaqaan Redmi K30.
Waxaan horey u ogaanay qiimaha iyo helitaanka daabacaadda Thom Browne ee Galaxy Z Flip
Daabacaadda gaarka ah ee Thom Browne ee Galaxy Flip laguma heli doono waddammada oo dhan, badanaa sababtuna waa qiimaheeda sarreeya.
Galaxy A70e, oo ah taleefanka soo socda ee Samsung ee miisaaniyadda, ayaa soo if baxay
Dhowr wax soo saar oo loo maleynayo Samsung Galaxy A70e, oo ah taleefan dhexdhexaad ah oo imaan doona sanadkan oo dhan, ayaa la shaaciyay.
Qeexitaannada Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) oo uu shaaca ka qaaday Google Play Console
Google Play Console-ka Google wuxuu ka diiwaan galiyay Samsung Galaxy Tav A 8.4 (2020) keydkeeda xog uruurinta dhowr faahfaahin.
iQOO 3 5G wuxuu helayaa dhibcaha ugu sareeya ee AnTuTu
IQOO 3 5G cusub ayaa ka mid ah telefoonada ugu dhaqsaha badan suuqa shaki la’aan sababtuna tahay processor-kiisa, RAM iyo UFS 3.1 oo keyd ah.
Lenovo waxay horeyba uga shaqeyneysaa taleefanka 5G-ga ah ee loo yaqaan 'Legion brand'
Lenovo wuxuu hadda ka shaqeynayaa soo saarista taleefan cusub oo ciyaaro ah, isagoo noqonaya kii ugu horreeyay ee ka socda shirkadda Legion ee leh isku xirnaanta 5G.
Sawiradii uguhoreeyay ee Google Pixel 5
Waxay horeyba u qaadatay wakhti si loo bilaabo helitaanka xogaha ka imanaya qalabka cusub ee mobilada ee Google. Maxaad uga hadleysaa tan xigta ...
Oppo A31 waa rasmi: 6,5 ″ shaashad iyo ColorOS 6.1
Kadib markii uu faafaahiyay dhammaan faahfaahinta, Oppo wuxuu rabay inuu ku dhawaaqo Oppo A31 cusub, oo ah taleefan horeyba looga heli jiray Indonesia.
Xiaomi waxay tijaabineysaa muuqaal amniga cusub ah MIUI 11 oo ka digaya oggolaanshaha barnaamijka
Xiaomi waxay soosaaraysaa muuqaal amni oo cusub MIUI 11 oo dhawaan lagu bixin doono iyada oo loo marayo cusbooneysiin kala duwan.
OnePlus 7, 7 Pro iyo 7T Pro waxay helayaan cusbooneysiinta ku dareysa balastarka amniga ee ugu dambeeyay
Cusbooneysiin cusub oo software OxygenOS ah ayaa loo rogayaa OnePlus 7, 7 Pro iyo 7T Pro oo leh horumarin kala duwan.
Duubista fiidiyowga ee Samsung Galaxy S8 20K waxay cuntaa 600MB daqiiqadii
Hal daqiiqo oo fiidiyow ah oo lagu duubay xalka 8K ee Samsung Galaxy S20 wuxuu ubaahan yahay kudhowaad 600 MB. oo ah kaydinta gudaha ah.
In kabadan 26 milyan oo yuuro ayaa soo saaray Xiaomi Mi 10 kaliya hal daqiiqo oo ah iibkiisii ​​ugu horeeyay
Iibinta Xiaomi Mi 10 waxay soo saartay in kabadan 200 milyan oo yuan - tiro u dhiganta qiyaastii 26 milyan oo euro - hal daqiiqo oo qura.
Sony Xperia 1.1 ayaa duubi doonta fiidiyowga 8K, Xperia Z9 ayaa loo maleynayay sidoo kale waa la daadiyay
Sony wuxuu qorsheeyay inuu kaga dhawaaqo aalado dhowr ah Mobile World Congress 2020, oo ay ku jiraan Sony Xperia 1.1, taleefan ...
Ku dhowaad dhammaan faahfaahinta farsamo ee Oppo A31 waa la sifeeyaa
Ku dhowaad dhammaan faahfaahinta Oppo A31 ee soo socota ayaa la muujiyay, taleefan dhowaan soo maray shahaadada Geekbench iyo Bluetooth.
Oppo Reno 3 Vitality Edition oo leh Snapdragon 765 ayaa si rasmi ah loo iibinayaa
The Oppo Reno 3 Vitality Edition oo leh Snapdragon 765 iyo 5G isku xirnaanta ayaa hadda loo heli karaa iib joogto ah Shiinaha.
OnePlus 8 ayaa loo maleynayaa inuu socod ku maray keydka keydka Geekbench
Geekbench, oo ah madal caan ah oo tijaabo ah ayaa diiwaan galisay taleefan cusub oo casri ah. Tan waxaa la rumaysan yahay inuu yahay OnePlus 8.
Xiaomi Mi 10 iyo Mi 10 Pro, calaamadaha cusub ee Snapdragon 865 ee soo saaraha Shiinaha
Xiaomi waxay durbaba soo bandhigtay calankeeda cusub, oo aan ka ahayn Xiaomi Mi 10 iyo Mi 10 Pro. Baro iyaga!
Realme ayaa ku dhawaaqday oo xaqiijineysa Realme X65 Pro 50G 5W Tiknoolajiyada Sare ee Degdegga ah
Tiknoolajiyada xawaaraha sare ee xawaaraha 65-watt ee Realme X50 Pro 5G ayaa lagu dhawaaqay shirkadda. Tan waxaa lagu magacaabaa SuperDart Charge.
Samsung ayaa ku dhawaaqday Powerbanks cusub iyo xeedho baabuur 45W
Samsung ayaa ku dhawaaqday laba Powerbank cusub iyo xeedho baabuur oo dhan 45W, qalab loogu talagalay qadka Galaxy S20 iyo Galaxy Z Flip.
Oppo wuxuu xaqiijinayaa dhammaan macluumaadka shaashadda Raadi X2
Maamulaha Oppo ayaa xaqiijiyay gudiga cusub ee Raadinta X2 oo la soo bandhigi doono 22-ka Febraayo munaasabada MWC 2020 ee magaalada Barcelona.
Realme X50 Pro 5G wuxuu iska dhigay AnTuTu wuxuuna la yimid Wi-Fi 6
Realme X50 Pro 5G waxaa lagu tijaabiyay barxadda tijaabada AnTuTu. Shaashad shaashadeed ayaa sidoo kale soo muuqatay oo muujinaysa inay la socoto Wi-Fi 6.
Taariikhda Geerida waa la sii Saadaaliyay: Wax Cusbooneysiin Dheeraad ah uma laha Telefoonka Muhiimka ah (PH-1)
Shirkada 'Essential' ayaa shaacisay inaysan mar dambe taageeri doonin Telefoonka Muhiimka ah (PH-1) ama adeegsadayaasheeda. Sidaa darteed, ma jiri doonaan cusbooneysiin dheeri ah sidoo kale.
Kuwani waa sawirrada POCO X2 ay ku qaadanayaan kamaraddiisa afar geesoodka ah 64 MP
Waxaan soo bandhigeynaa dhowr tusaale oo kamarad ah POCO X2, si aan fikrad kaaga siino sida ugu wanaagsan ee kamaradaha afaraad ee 64MP uu yahay.
Baro dhammaan tilmaamaha cajiibka ah ee shaashadda 90 Hz ee Xiaomi Mi 10
Xiaomi, iyada oo loo marayo boodhadh rasmi ah oo rasmi ah, ayaa shaaca ka qaaday astaamaha iyo tilmaamaha shaashadda Mi 10.
Xiaomi Mi 10 waxaa lagu bilaabi doonaa batariyaal ku dhow 5000 mAh oo leh lacag la'aan iyo lacag la'aan wireless
Xiaomi, iyada oo loo marayo boodhadh rasmi ah oo rasmi ah, ayaa siisay dhammaan faahfaahinta ku saabsan batteriga Mi 10.
Galaxy S10 vs Galaxy S20 Ma u qalantaa isbedelka?
Markii la soo saaray Samsung Galaxy S20, isticmaaleyaal badan ayaa laga yaabaa inay xiiseynayaan dib u habeynta hore ee Galaxy S10. Noocan oo kale ah
Vivo V19 Pro ayaa lagu dhawaaqi doonaa horaanta bisha Maarso
Shirkadda Vivo waxay ku dhawaaqi doontaa bilowga bisha Maarso bedelka Vivo V17 Pro, oo loo yaqaan V19 Pro. Waxay u imaan doontaa inay soo saarto processor Qualcomm awood badan.
Qaybta dambe ee Samsung Galaxy M11 waxay muujineysaa kamarad saddex-laab ah
Qaybta dambe ee Samsung Galaxy A11 waxay umuuqataa inay xaqiijineyso wadarta seddex kamaradood. Furitaanka taleefankan ma qaadan doono waqti aad u dheer.
Samsung iyo Xbox waxay iskaashanayaan barnaamijka ciyaarta daruuraha, waxay ku dhawaaqayaan Forza ee Galaxy
Hada waad iska qori kartaa Forza Street, ciyaarta wadada u xaari doonta heshiiska u dhexeeya Samsung iyo Microsoft ee adeegga socodka ciyaarta.
Oppo waxay caddeysaa oo ay xaqiijineysaa taageerkeeda soo saarista waji-ka-saarista ka hortagga faafitaanka cudurka 'coronavirus'
Oppo waxay sheegtay inay taageero u dirtay shirkadaha Shiinaha ee la xiriira soo saarista waji-furka si loola tacaalo coronavirus.
IQOO 3 5G horeyba waxay u leedahay taariikh rasmi ah oo rasmi ah: waxay la imaan doontaa Snapdragon 865
IQOO 3 5G waa astaanta soo socota ee nooc-hoosaadka Vivo, oo ah iQOO. Moobaylkan waxaa la bilaabi doonaa 25-ka Febraayo.
Dhammaan wixii ku saabsan Samsung Galaxy S20, S20 Plus iyo S20 Ultra, calanka cusub ee Koonfurta Kuuriya
Galaxy S20, taxanaha cusub ee Samsung, ayaa ugu dambeyn la soo saaray. Waxaan kuu soo bandhigeynaa iyada oo leh faahfaahinteeda oo dhan!
Samsung Galaxy Buds cusub + ayaa imanaya
Maanta waxaan la kulanay xubnaha cusub ee qoyska Samsung, waxaana ka mid ah Samsung Galaxy Buds + sameecadaha dhagaha la ’.
Dhammaan wixii ku saabsan Flip-ka cusub ee Galaxy Z Flip, casriga casriga ee Samsung
Samsung ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay soo bandhigida cusub ee loo yaqaan 'Galaxy Z Flip', oo ah taleefan aan cidna uga tagi doonin qof aan dan ka lahayn naqshadiisa iyo awoodeeda awgeed.
Huawei Mate 30 Pro wuxuu imaan doonaa Boqortooyada Midowday sidoo kale iyadoon adeegyo Google lahayn
22-ka Febraayo, Huawei wuxuu dhigi doonaa Mate 30 Pro iibka Boqortooyada Ingiriiska, terminaal bilaash ah ayaa lagu raaci doonaa Galaxy Watch GT2 iyo Freebuds 3.
Redmi 8A Dual waa rasmi: Waxay ku timid Snapdragon 439
Redmi ayaa ku dhawaaqday taleefanka cusub ee 8A Dual, oo ah walaalka ka weyn ee 8A kaas oo iman doona suuqa Hindiya toddobaad gudihiis.
Sawir sir ah oo la sheegay inuu yahay ASUS Zenfone 7 ayaa la muujiyay
Sawirka loo maleynayo inuu yahay Zenfone 7 ayaa xaday, taleefan ka tegaya kamaradda isku laaban dareemayaasha go'an ee gadaasheeda.
Motorola One Action wuxuu bilaabay inuu helo Android 10
Lenovo ayaa durbaba bilaabay inay soo saarto cusbooneysiinta Android 10 ee Motorola One Action. Midkani wuxuu la yimaadaa dhowr astaamo oo cusub.
Android 10 Cusbooneysiinta Caalamiga ah ee ku saleysan EMUI 10 Ugu dambeyntii waxay imaaneysaa Huawei Mate 20 Lite
Heerka dhexe ee Huawei Mate 20 Lite ayaa ugu dambeyntii helaya casriyeyn caalami ah EMUI 10 oo ku saleysan Android 10.
Boodhadhka Mi 10 wuxuu xaqiijinayaa kamaradiisa 4 108MP iyo shaashadda qalooca
Waxaan sidoo kale ka hadleynaa nidaamka qaboojinta ee Xiaomi Mi 10 ku yeelan doono soo bandhigidiisa maalmo gudahood iyo kamaradaha.
Realme X50 Pro 5G ayaa la xaqiijiyay in lagu bilaabi doono MWC20
Haddana taleefan kale oo casri ah ayaa lagu soo bandhigi doonaa Sannadkan Shirka Caalamiga ah ee Mobile-ka ee magaalada Barcelona, ​​Spain, waana Realme X50 Pro 5G.
Wax walba oo aan ka ogaanno Galaxy S20 iyo Galaxy Z Flip kahor soo bandhigidiisa
Berri, Febraayo 11, shirkadda Kuuriya ee Samsung ayaa si rasmi ah u soo bandhigi doonta laba terminaal oo cusub. Waxaan ka hadleynaa Galaxy S20 (bedelka ...
Xayeysiinta fiidiyowga ee ugu horreeya ee Flip Galaxy Z
Waxaan aragnay ogeysiis rasmi ah oo rasmi ah ee Galaxy Z Flip inta lagu gudajiray Abaalmarinta Akadeemiyada ee Hollywood.
Oppo wuxuu ku dhawaaqay Reno 3 Vitality, oo leh processor wanaagsan iyo kamarad hoose
Oppo waxay soo saartay nooc ka mid ah Reno 3 oo loo yaqaan 'Reno 3 Vitality', oo ah aalad moobayl ah oo ku dareysa xoogaa horumar ah tii hore.
Boostada xayeysiinta ee Honor 9X Lite waxay muujineysaa kamaraddeeda dambe ee 48 MP
Daadinta cusub waxay faahfaahin ka bixinaysaa dhowr arrimood oo muhiim ah oo ku saabsan Sharafta 9X Lite. Mobiladani waxay ka muuqatay boodhadh xayaysiis ah.
Sawirrada la soo rogay ee LG V60 ThinQ ayaa la helay oo muujinaya dhowr astaamo oo mobilka ah
Qaar ka mid ah sawirrada la soo rogay ee LG V60 ThinQ ayaa soo ifbaxay oo muujiyey dhowr dhinac oo muhiim ah oo taleefanka gacanta ah.
Qarowga Huawei ma dhammaado: Mareykanka wuxuu qorsheynayaa inuu cunaqabateyn dheeri ah ku dabaqo soo saaraha Shiinaha
Mareykanku wuxuu dib u eegi doonaa xaaladda hadda ee dhaqdhaqaaqa Huawei, si loo horumariyo qorshooyinka khuseeya ee ka dhanka ah "shirkadda laga shakisan yahay."
Huawei Mate 9 ma heli doono cusbooneysiinta EMUI 10
Warka xun ee isticmaaleyaasha Huawei Mate 9 ee sugayay cusbooneysiinta ku dari lahayd EMUI 10 qalabka.
Sawirkii ugu dambeeyay ee xaday ee Galaxy Z Flip wuxuu muujinayaa shaashadda shaashadda
Waxaan sidoo kale ka heli doonnaa astaanta shaashadda shaashadda taleefanka casriga ah ee isku laaban shirkadda Samsung ee Kuuriya laga leeyahay, sida aan ku arki karno sawirradii ugu dambeeyay ee xaday
Samsung Galaxy M31 waxaa laga heli doonaa Spain
Samsung ayaa bilawday kala duwanaanta M ee ku wajahan suuqa Hindiya, si kastaba ha noqotee, laakiin si yar ...
Shaashadda ayaa soo bandhigeysa faahfaahinta Realme X50 Pro 5G
Shaashad shaashadeed oo uu muujiyey Xu Qi Chase ayaa muujineysa faahfaahinta calanka soo socda ee Realme, X50 Pro 5G.
Huawei wuxuu ku dhawaaqay Freebuds 3 Red Edition ee Maalinta Jacaylka
Huawei wuxuu bilaabayaa "Red Edition" oo ah sameecadihiisa Freebuds 3 ee loogu talagalay Maalinta Jacaylka, hal ikhtiyaar oo dheeraad ah oo loogu talagalay codadka madow iyo caddaan.
Daadinta cusub ayaa muujineysa sida OnePlus 8 Pro u eg yahay iyo dhowr ka mid ah qeexitaankiisa farsamo
Daadinta cusubi waxay faahfaahin ka bixinaysaa sawirka la bixiyay ee muuqaalka OnePlus 8 Pro iyo dhowr ka mid ah astaamaha suurtagalka ah iyo tilmaamaha.
Realme C3 waa super-miisaaniyadda cusub ee dhex dhexaadka ah oo ku faaneysa Mediatek's Helio G70
Realme C3 waa taleefan casri ah oo cusub oo dhowaan lagu soo saaray barnaamijka Mediatek ee Helio G70.
Xiaomi Mi 10 Pro waxaa lagu qabtay Geekbench oo leh 8 GB oo RAM ah
Barxadda tijaabada Geekbench ayaa liis garaysay shirkadda 'Xiaomi Mi 10 Pro' oo leh 8 GB oo RAM ah oo ku jirta keydkeeda xogta.
Nubia waxay xaqiijineysaa bilaabida Red Magic 5G oo leh 144 Hz bandhig loogu talagalay MWC 2020
Nubia waxay ku dhawaaqday Red Magic 5G in laga bilaabi doono Mobile World Congress 2020 iyadoo la muujinayo heerka cusbooneysiinta ee 144Hz.
Vivo Y91C, nooca dhexe ee cusub ee shirkadda Shiinaha
Vivo ayaa ku dhawaaqday taleefanka cusub ee Y91C kaas oo hadda laga heli karo dalka Bangaladesh wuxuuna ku yimid nooc ka mid ah nooca Y91i.
Moto G Stylus iyo Moto G8 Power ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay
Motorola waxay ku dhawaaqday labadeeda nooc ee casriga ah ee dhexe oo kala ah Moto G Stylus iyo Moto G8 Power. Labaduba waxay imaan doonaan Guga.
Crosscall waxay ku dhawaaqeysaa seddex casriga casriga ah ee casriga ah ee Android
Crosscall waxay ku dhawaaqday wadar ahaan saddex taleefannada gacanta ee bannaanka ah ee loogu talagalay dadka u baahan qalab ka baxsan waddada.
Oppo Find X2 si rasmi ah ayaa loo xaqiijiyay: Waxaa la soo bandhigi doonaa Febraayo 22
Oppo waxay xaqiijisay maalinta iyo waqtiga la soo bandhigayo calankeeda soo socota, the Find X2. Qofka dhaxalka u ah 'Find X' wuxuu imanayaa ku dhawaad ​​labo sano kadib.
ZTE Axon 10s Pro horeyba waa rasmi oo sidoo kale mobiilkii ugu horreeyay ee leh LPDDR5 RAM
ZTE Axon 10s Pro oo leh Snapdragon 865 horey ayaa loo sii daayay. Ogow dhammaan astaamaha, qeexitaannada farsamo, qiimaha iyo helitaanka.
Maamulaha guud ee Nubia ayaa shaaca ka qaaday in Red Magic 5G uu la yimaado kaarka LPDDR5 RAM
Nubia Red Magic 5G ayaa soo bandhigi doonta kaarka Samsung ee LPDDR5 RAM, sida uu sheegayo waxa maamulaha shirkaddu ku shaacisay Weibo.
Huawei Y7p waa taleefannada casriga ah ee cusub oo leh shaashad daloollan
Huawei Y7p waa taleefan casri ah oo cusub oo suuqa laga soo saaray oo leh shaashad feer-dalo ah iyo 48 MP oo saddex-laab kamerad ah.
Sony waxay iibisaa 1,3 milyan oo aaladaha mobilada ah rubuca hore
Sony waxay ku guuleysatay iibin wanaagsan rubucii seddexaad ee shirkadda, iyadoo maareynaysa inay labalaabto cutubyada rubuca saddexaad.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Redmi K30 Pro ayaa soo ifbaxaya: waxay ku imaan kartaa batari ku dhow 5000 mAh iyo lacag deg deg ah oo ah 33 W
Macluumaadka cusub ee lagu soo bandhigay Weibo wuxuu soo jeedinayaa in Redmi K30 Pro lagu bilaabi karo batari 4,700 mAh ah iyo 33 W oo degdeg ah.
Waa rasmi: Xiaomi Mi 10 wuxuu ku faani doonaa kaararka ugu horreeya ee LPDDR5 RAM ee mobilada
Micron Technology ayaa daaha ka qaaday in Xiaomi Mi 10 ee soo socota uu noqon doono taleefankii ugu horreeyay ee lagu qalabeeyo xusuusta LPDDR5.
Xiaomi Mi A2 Lite waxaa lagu qabtay Geekbench oo wata Android 10
Qadka dhexe ee Xiaomi Mi A2 Lite ayaa lagu qabtay bartilmaameedka Geekbench iyadoo la adeegsanayo nidaamka hawlgalka ee Android 10.
ZTE wuxuu xaqiijinayaa kaqeyb galkiisa MWC 2020 inkasta oo Coronavirus
ZTE waxay xaqiijisay imaatinkeeda MWC 2020 ee Barcelona inkasta oo Coronavirus. Shirkadda ayaa tusi doonta taageerada 5G iyo aaladaha moobaylka ee soo socda.
Maadada coronavirus awgeed, LG wuxuu joojiyay imaatinkiisii ​​MWC 2020
Shirkadda Kuuriyada Waqooyi ee LG ayaa bayaan u dirtay warbaahinta warbixin ku saabsan ka soo qeybgal la'aanta MWC 2020
Samsung ayaa sii deynaysa sawirrada Galaxy S20 maalmo gudahood markii la soo bandhigo
Waxaa laga soo qaatay dukaanka khadka tooska ah ee Samsung oo si qalad ah loo dhigay isla markaana wax yar kadib tirtiray Waxay xaqiijinayaan wixii aan horay u ogaanay.
Samsung Galaxy 01 ayaa ka bilaabi doonta iibinta 6-da bisha Febraayo dalka Vietnam
Samsung Galaxy 01 cusub ayaa bilaabi doona in lagu iibiyo bisha Febraayo 6 iyada oo laga iibinayo Vietnam qiimo ka hooseeya 110 euro heerka sarifka.
Samsung Gear S2 wuxuu helayaa cusbooneysiin cusub oo weyn
Samsung waxay go'aansatay inay cusbooneysiiso smartwatch-ka Gear S2 waxyar kadib. Waxay ku sameysaa horumarin la taaban karo, oo ay kujirto inay siiso ismaamul wanaagsan.
Faahfaahinta jiilka cusub ee Galaxy Buds waa la sifeeyey: batteri badan iyo amar degdeg ah
Tilmaamaha jiilka cusub ee Galaxy Buds waa la sifeeyaa, oo la soo bandhigi doonaa Febraayo 11.
Soosaarka POCO F1 ayaa loo hakiyay "la'aanta Snapdragon 845 chipsets"
Soosaarida POCO F1 waxaa laga yaabaa in la joojiyay sababo la xiriira daahfurka POCO X2. Si kastaba ha noqotee, waxaa la sheeganayaa inay sabab u tahay la'aanta Snapdragon 845.
Cusbooneysiin cusub oo loogu talagalay Huawei Mate 30 Pro 5G wuxuu hagaajiyaa xakamaynta mugga kumbuyuutarka
Cusbooneysiin cusub ayaa loo soo saaray Huawei Mate 30 Pro 5G kaas oo hagaajiya xakamaynta mugga muuqaalka iswaafaqsan.
POCO X2, taleefanka casriga ee cusub ee ciyaaraha ayaa horey loogu sii daayay shaashadda Snapdragon 730G iyo 120 Hz
Xiaomi ayaa ugu dambayntii soo saartay POCO X2, taleefankeeda casriga ah oo cusub oo ay kujiraan Snapdragon 730G iyo bandhig 120 Hz ah.
Cusboonaysiinta Android 10 ee loogu talagalay OnePlus 6 iyo 6T waxay dib u bilaabaysaa markii afaraad
Cusbooneysiinta Android 10 waxaa loo soo bandhigayaa markii afaraad OnePlus 6 iyo 6T. Markan waa inay timaaddaa khaladaad la'aan.
Hadalka Samsung ee smart, Galaxy Home Mini, inuu suuqa soo galo Febraayo 12
Bisha Febraayo ee soo socota 12 waxay noqon kartaa taariikhda rasmiga ah ee la soo saari doono Galaxy Home Mini, sida lagu sheegay bogga rasmiga ah ee Samsungen Korea.
10-ka taleefan ee casriga ah ee ugu awooda badan Janaayo 2020, sida ay qortay AnTuTu
Halbeegga AnTuTu wuxuu noo keenayaa qiimeynta 10-ka taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan Janawari 2020. Waxaan halkaan kugu tuseynaa!
Galaxy S20 wuxuu la qabsan doonaa dhamaan seddexda kamaradood isla waqtigaas
Mid ka mid ah sheekooyinka xiisaha leh ee ka iman doona gacanta Galaxy S20 waxaa laga helaa suurtagalnimada in la wada qaado seddex qabsasho
Lu Weibing wuxuu soo bandhigayaa faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan tiknoolajiyada xawaaraha degdegga ah ee 100 ee Xiaomi
Maamulaha ugu sareeya shirkadda Xiaomi Lu Weibing ayaa shaaca ka qaaday faahfaahino dhowr ah oo ku saabsan shirkadda 100-watt Super Charge Turbo ee tikniyoolajiyadda lagu dalaco.
TCL iyo BlackBerry waxay kala baxaan siyaabo 31 Ogosto
TCL iyo BlackBerry ayaa kala tagaya kadib midowgii seddex sano kabadan. Midka labaad wuxuu ku xaqiijinayaa qoraal rasmi ah.
Qalabka kamaradaha gadaal ee 64 MP waa waxa Redmi K30 Pro lahaan lahaa
Xog cusub oo la soo geliyay Weibo ayaa soo jeedineysa in Redmi K30 Pro lagu soo bandhigi doono 686MP Sony IMX64 afar gees ah.
Tani waa taariikhda cusub ee suurtagalka ah ee soosaarida Xiaomi Mi 10
Taariikhda suurtagalka ah ee soosaarida taxanaha taxanaha ee Xiaomi Mi 10 ayaa markale la shaaciyey, iyada oo ka hor imaaneysa macluumaad hore.
Huawei iyo shirkadaha kale ee Shiinaha ayaa sii wadaya howlahooda, in kasta oo ay korodhay kiisaska Coronavirus
Afhayeen u hadlay Huawei ayaa sheegay in shirkaddu ay sii wadayso inay ilaaliso howlaheeda ganacsi iyo wax soo saar iyadoo ay jirto Coronavirus.
ZTE Axon 10 Pro wuxuu hadda helaa Android 10 Yurub iyo Mareykanka
Isticmaalayaasha ZTE Axon 10 Pro ee Mareykanka iyo Yurub waxay durbaba helayaan casriyeynta Android 10 ee ku saleysan MiFavor.
Fiidiyowgii ugu horreeyay ee hawlgalka Galaxy Z Flip waa la sifeeyey
Fiidiyowga ugu horreeya ee Galaxy Z Flip waxaa lagu sifeeyey halka aan ka arki karno sida loo furo, shaashadda dibedda oo daaran iyo cabirkeeda
Ulefone Armor 7, waa taleefan qalfoof ka yar 500 euro
Ulefone waxay soo saareysaa Armor 7 cusub, oo ah taleefan loo sameeyay si ay ugu gudubto nooc kasta oo tijaabo adkaysi ah, dhammaantoodna ay ka yaryihiin € 500.
LG G8 ThinQ unugyadiisa furan ayaa wali uqalma Android 10
Unugyada la furay ee dhamaadka sare LG G8 ThinQ waxay helayaan casriyeynta Android 10 ee Mareykanka.
Android 10 wuxuu bilaabmayaa inuu yimaado Asus ZenFone Max Pro M1 iyo M2
Cusbooneysi cusub ayaa loo siidayaa Asus ZenFone Max Pro M1 iyo ZenFone Max Pro M2. Tani waxay ku dareysaa beta-ka Android 10.
Nokia Captain America ayaa muujinaya tusaalooyinka, sawirada iyo qiimaha
Sawirradii ugu horreeyay ee Nokia Captain America, oo sidoo kale loo yaqaan Nokia 5.2, ayaa la muujiyay. Taariikhda qiimaha iyo bixitaanka ayaa la muujiyay.
Sony Xperia 1.1 waxay soo bandhigeysaa macluumaadka ku saabsan kamaradaha
Sony wuxuu qorsheynayaa inuu ku dhawaaqo Xperia 1.1 cusub, oo ah taleefan casri ah oo heer sare ah oo aan horay u aqoon jirnay inuu yahay Sony Xperia 5 Plus.
Shirkadda Huawei waxay samaysatay taleefan gacmeed isku laaban oo leh stylus: waxay noqon kartaa Mate X2
Shatiga cusub ee loo yaqaan 'Huawei patent' ayaa soo muuqday oo u dhigmi kara Mate X2, oo ah taleefankiisa xiga ee isku laaban kaas oo la bilaabi doono rubuca saddexaad ee 2020